(L) ဂျပန်နိုင်ငံ၏လိင်ဆက်ဆံမှုကိုမုန်းတီးခြင်းအားပြောင်းပြန်လုပ်ခြင်းသည်မျှော်လင့်ခြင်းပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်းအပေါ်တွင်မူတည်သည် (၂၀၁၂) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ် Porn
(L) ဂျပန်နိုင်ငံ၏လိင်ဆက်ဆံမှုကိုမုန်းတီးခြင်းအားပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသည်မျှော်လင့်ချက်ပြန်လည်ရှင်သန်လာမှုအပေါ်တွင်မူတည်သည် (၂၀၁၂)
မှတ်ချက်များ - ဂျပန်ရှိအမျိုးသားများသည်တကယ့်ဘဝမိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုတိုး။ မုန်းတီးနေသည်။ ယခင်ဆောင်းပါးများသည်အစစ်အမှန်အကြောင်းရင်းကိုအရိပ်အမြွက်ဖော်ပြခဲ့သည်၊ သို့သော်ဤဆောင်းပါးသည်အရိပ်အမြွက်ဖော်ပြခြင်းထက်မကပြုလုပ်သည်။
Roger PULVERS, တနင်္ဂနွေ, ဧပြီ 29, 2012 အားဖြင့်
အဆိုပါဂျပန် Times သတင်းစာမှအထူး
“ လူငယ်တွေလိင်ကိုမနှစ်သက်တာကလက်ရှိနှုန်းထားနဲ့ဆက်ပြီးတိုးလာမယ်ဆိုရင်ဂျပန်နိမ့်ကျတဲ့မွေးဖွားနှုန်းနဲ့အိုမင်းရင့်ရော်မှုအခြေအနေကပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်။ ဂျပန်စီးပွားရေးဟာအခုထက်ပိုပြီးတက်ကြွနေလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဒီနိုင်ငံကမျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်။
ဒီအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ခန့်မှန်းချက်ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Media Factory မှထုတ်ဝေသောစာအုပ်တစ်ခုတွင် Kunio Kitamura မှပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Kitamura သည်သားဖွားမီးယပ်အထူးကု၊ တိုကျိုရှိသူ၏မိသားစုစီမံကိန်းဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ထားသောမျိုးပွားခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကြောင်းစာအုပ်တစ်ဒါဇင်ကျော်ကိုရေးသားသူဖြစ်သည်။ ယခုသူသည်“ Sekkusugirai na Wakamonotachi” (“ လိင်ကိစ္စကိုဆန့်ကျင်သောလူငယ်များ”) ဖြင့်သူပြသခဲ့သည်မှာဂျပန်လူမျိုးလူငယ်များသည်လိင်မှုကိစ္စအားပိတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
တိုင်းနှစ်နှစ်စစ်တမ်းတစ်ခုဂျပန်တွင်အထီး-အမျိုးသမီးဆက်ဆံရေးအပေါ်, ကနျြးမာရေး, အလုပ်သမားနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ, ကောက်ယူနေပါတယ်။ ဤတွင်ရည်ညွှန်းသည့်နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စစ်တမ်းကောက်ယူအချို့ 1,500 ကလူထံမှအဖြေကိုပေါ်အခြေခံပြီးလိင်စိတ်ဝင်စားမှုစပ်လျဉ်းရလဒ်တချို့ရှိနေပါတယ်။
၂ ဝဝ ၈ ခုနှစ်တွင်အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၁၉ နှစ်အကြားရှိယောက်ျားလေးများသည်လိင်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်မ ၀ င်စားခြင်း (သို့) မနှစ်မြို့ခြင်းများ - ၁၇.၅ ရာခိုင်နှုန်း (၂၀၁၀ တွင် ၃၆.၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ။ “ စိတ် ၀ င်စားမှုမရှိခြင်း (သို့) လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဆန့်ကျင်ခြင်း” ရှိသောအသက် ၂၀-၂၄ နှစ်ရှိအမျိုးသားများ - ၁၁.၈ ရာခိုင်နှုန်း (၂၀၁၀ တွင် ၂၁.၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ။
တကယ်တော့, 30-34 အသက်သူတို့အား မှလွဲ. အထီးရှိသမျှတို့ကိုအသက်အရွယ်အုပ်စုများအဘို့, နှုန်း 2008 ကနေနှစ်နှစ်အတွင်းသိသိသာသာမြင့်တက်လာခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၁၉ နှစ်ကြားအမျိုးသမီး ၄၆.၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်၎င်းတို့သည်“ စိတ်မ ၀ င်စားခြင်း” သို့မဟုတ်“ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဆန့်ကျင်ခြင်း” (၂၀၁၀ တွင် ၅၈.၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်အသက် ၂၀ မှ ၂၄ နှစ်အတွင်းရှိအမျိုးသမီးများအနက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းက၎င်းတို့သည်“ စိတ် ၀ င်စားခြင်းမရှိ” သို့မဟုတ်“ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဆန့်ကျင်ခြင်း” (၂၀၁၀ တွင် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
2008 နှင့် 2010 အကြားမှတ်သားတိုးလည်းအသက်အကြီးဆုံးအမျိုးသမီးမေးခွန်းထုတ်, 49 သည်အသက်အရွယ်အုပ်စုတက်အတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Kitamura ဒီဒါသည်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးနှံ့နှံ့စပ်စပ်ဆန်းစစ်သို့ဝင်။ သူ့စာအုပ်လညျးမိမိဆေးခန်းမှလာသောလူငယ်များနှင့်အတူအင်တာဗျူးများ၏နံပါတ်ပေါ်အစီရင်ခံစာများပါဝင်သည်။
လူငယ်တ ဦး ကသူ၌လိင်မှုကိစ္စရှိသည်ဟုဆိုသော်လည်းတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ဟုဆိုသည်။ အချို့ကမူမိန်းကလေးများကို Anime ဇာတ်ကောင်များသို့မဟုတ်နှစ်ဖက်မြင်သတို့သမီးဟုခေါ်သည့်တကယ့်အရာထက်သာလွန်သောအရုပ်များထက်ပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်သည်ဟုဆိုကြသည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူတစ် ဦး က“ အနည်းဆုံးတော့မင်းတို့ကိုမင်းတို့ကိုပစ်ထားမှာမဟုတ်ဘူး.
ဤအတောအတွင်း Kitamura အချို့လုလင်တို့သည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသူ၏ဆေးခန်းတိုင်ကြားလာသည်ဟုဆို၏။ အခြားသူများကအင်တာနက်ကိုက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်အလွန်အကျွံလိင်စောင့်ကြည့်လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ဘို့သူတို့နှုတ်၌မကောင်းတဲ့အရသာသူတို့နှင့်အတူကျန်ရစ်ခဲ့သည်ရှင်းပြပါ။ အတော်များများအားဖြင့်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့ကျေနပ်, အလွန်မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့ဝန်ခံ။
ကီတူးရာကလူငယ်များအားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင်“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုအခြားသူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမနှစ်မြို့စေပါ။ ”
ဒါပေမယ့်သူကသူ့ရဲ့သတင်းမှားများနှင့်ညစ်ညမ်း၏ Overload, နှင့်အွန်လိုင်းပြုသောအမှုဆက်သွယ်ရေး၏ပမာဏနှင့်အတူထက်အမှန်တကယ်လူ့အဆက်အသွယ်မှတဆင့်သောရေးသားခြင်း, အင်တာနက်အားစွဲချက်တင်ထားဘူး “ ဒီကနေ့အင်တာနက်ကို ဦး တည်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာလူငယ်တွေအပေါ်အထူးသဖြင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ ”
ထို့အပြင်သူသည်ဤလမ်းကြောင်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသောဂျပန်လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိအချက်များကိုထောက်ပြသည်။ Kitamura ၏ယောက်ျားလူနာများကလိင်မဆက်ဆံရသည့်အကြောင်းရင်းအချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
သန္ဓေတားဆေးဝယ်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခန်းသို့မဟုတ်ကားရှိခြင်းစသည်ဖြင့် -“ လိင်ဆက်ဆံဖို့ငွေလိုတယ်။
"Sexless" ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ် Japan Sexual Science မှလူသားမျိုးပွားမှု၏ရှုထောင့်နှင့်ဆက်ဆံသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှသတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး သည်“ တစ်လနှင့်အထက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမရှိသောအခြေအနေတွင်ဖြစ်ပွားသည်။ ” လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်“ နမ်းခြင်း၊ ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ခြင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်းနှင့်အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်း” စသည့်အရာများပါဝင်သည်။
ရှည်လျားသောအလုပ်ချိန်နှင့် sexless အပြုအမူအကြားဆက်သွယ်မှုအပေါ်လေ့လာရေးသီတင်းပတ် display ကိုတစ်ဦးလျှင် 49 အလုပ်လုပ်သူတွေကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနာရီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းသိသိသာသာ Drop-ပယ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။
အမျိုးသမီးများအကြားလိင်မနှစ်မြို့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ Kitamura မှ“ လူငယ်များလိင်ကိုဆန့်ကျင်သည့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း” မှကိုးကားသောအမျိုးသမီးလူနာများပေးသောအကြောင်းရင်းအချို့မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးငယ်တစ် ဦး က“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုငါယုံတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါမလိင်ဆက်ဆံတာကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူး” ဟုဆိုသည်။ အခြားတစ်ယောက်ကသူမသည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်နာကျင်မှုခံစားရကြောင်း၎င်းအားရှောင်ရှားကြောင်းပြောပြသည်။ အခြားတစ် ဦး က“ ယောက်ျားတွေကညစ်ပတ်တယ်၊ ပုန်ကန်တယ်။ သူမက“ ညစ်ပတ်ပြီးဆံပင်ပေါက်နေတယ်၊ ​​သူ့ပခုံးပေါ်မှာထိုင်နေတာ၊ မျက်လုံးထောင့်ကမျက်ခွံမျက်လုံး၊ အပြောက်ကြီးထွားမှုမရှိဘဲအလင်းရောင်ပုံစံမျိုးမလုပ်ရသေးတဲ့ဝီစကီစသည်တို့” ကဲ့သို့သောသူတို့၏ညစ်ညမ်းသောနှင့်စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသောလက္ခဏာများကိုညွှန်ပြခဲ့သည်။ ချွေးထွက်သွားအောင်ဆက်လုပ်တဲ့အခါငါမခံနိုင်တော့ဘူး၊ ပြီးတော့သူတို့သွားပြီးညစ်ပတ်တဲ့လက်ကိုင်ပုဝါကိုသူတို့အိတ်ကပ်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ ”
သို့သော်အခြားအမျိုးသမီးငယ်များကလူငယ်များကဲ့သို့သူတို့၏ ၀ ါသနာသည်လိင်ကိစ္စထက် ပို၍ စိတ်ဝင်စားသည်ဟုဆိုကြသည်။ အချို့ကမူလိင်ခြားသူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်သူတို့၏အသွင်အပြင်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဟုဆိုကြသည်။
လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းမှထွက်ခွာခြင်းသည်ဂျပန်ရှိလူငယ်များအတွက်ကန့်သတ်မထားသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုကီတာရာမှဝန်ခံသည် "ခေတ်ကာလတလျှောက်လုံးဂျပန်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့အလွှာဟာဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့နေရတာပဲ" ဟုသူကရေးသားခဲ့သည်။
သူသည်သူ့ကိုယ်ပိုင်လိင်ပညာရေးနှင့်အရွယ်ရောက်လာမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ သူသည်အနာဂတ်၌လိင်မှုကိစ္စကိုမည်သို့ဖြေရှင်းမည်ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပေးသည်။ ၎င်းတို့တွင်ယနေ့လူငယ်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပိုမိုလက်တွေ့ကျသောလိင်ပညာရေးကိုပေးခြင်းနှင့်လူငယ်များ၏ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်များတိုးတက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ သူက“ လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်လူအများကြားဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။
ဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေရှိပေမဲ့လည်းငါဟာ Kitamura ရဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ခြင်းမှရှောင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ လိင်ဆန့်ကျင်တဲ့ရောဂါကဲ့သို့သောပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေကဂျပန်လူငယ်လေးကိုဘာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလဲ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူငယ်များသည်ဖန်သားပြင်များနှင့်ကပ်လျက်ရှိကြသော်လည်းနိုင်ငံအများစု၏လိင်ကိစ္စကိုမနှစ်သက်သည့်ကိန်းဂဏန်းများမှာဂျပန်ကဲ့သို့အလွန်ဆိုးရွားသည့်အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ယခင်ကဂျပန်လူမျိုးများသည်ယခင်ကထက်ယခုထက် ပို၍ ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ရန်၊ သူတို့ထဲမှအနည်းငယ်တွင်ကိုယ်ပိုင်ကားများသို့မဟုတ်တိုက်ခန်းများရှိသည်။ သို့တိုင်သူတို့သည်ကြီးမားသောမိသားစုများကိုမွေးဖွားနိုင်ခဲ့သည်။
လူတစ် ဦး ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေသို့မဟုတ်မသန်စွမ်းမှုအပြင်သူတို့၏လိင်ဆန္ဒများကိုလျော့ကျစေသည့်အပြင်ပြproblemနာသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်သည်။
တကယ့်အကြောင်းပြချက်ကတော့ယနေ့ခေတ်ဂျပန်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာတက်ကြွနေတဲ့စွမ်းအားမရှိခြင်းပဲ။ ဂျပန်စစ်ပြီးကာလတွင်အောင်မြင်မှုရအောင်ဖန်တီးသည့်ကလေးငယ်များ၏မျိုးဆက်သစ်များကိုသရုပ်ဖော်သည့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအချက်များ - တက်။ သွားခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ကလေးသူငယ်များအတွက်အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ခံစားချက် - သည်ယခုတွင်ဤမျှရှားပါးနေသည်။
ကိုယ်ကသာ Tango နှစ်ခုကြာနိုင်ပေမယ့်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဆီသို့င်း၏လမ်းကြောင်းရှာတွေ့ထားတဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုကြာပါသည်။
ဂျပန်တွင်အိမ်မထောင်ဘဲနေခြင်း Syndrome - ယဉ်ကျေးမှုသတ်မှတ်ချက်။ ဖြစ်ရပ်ဆန်းနှင့်ဆေးခန်းအကြံပြုချက်များ (2015)
ဂျပန်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစျြလြူရှုမှုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေး (2013) အန်တရာယျဖြစ်ပါတယ်